Ebumnuche 5 iji bulite egwu gị ma ọ bụ vidiyo gị na ndị ọzọ | Martech Zone
Ebumnuche 5 iji bulite egwu gị ma ọ bụ vidiyo gị na ndị ọzọ
Sọnde, Septemba 24, 2006 Saturday, March 31, 2007 Douglas Karr
Ole n’ime unu gụrụ “Usoro ojiji”? Ọ bụrụ na ị na-enye ọdịnaya site na ndị ọzọ, ị nwere ike ịchọrọ ịtụgharị ya ọzọ. Ohere inweta bụ na ha nwere ikike, nweere onwe ha n'efu, ikike ijikwa ma kesaa ọdịnaya gị n'agaghị akwụghachi gị ụgwọ maka ya. Ọ bụrụ na ị ga-agabiga nsogbu nke ịcha vidiyo, mp3, Podcast, wdg…. jiri ego ma were onwe gị nọrọ na ya. N'ụzọ ahụ, ịkwesighi ikwenye na ụfọdụ n'ime Usoro Ojiji ndị a dị egwu nke ga-enye ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ ohere ịnweta ỌZỌ ego nke ọdịnaya gị.
Ọ bụrụ na ị bulite vidiyo na Youtube na Youtube na-enweta otu nde ihe na ya… naanị itinye ego na akpa ha! Gịnị mere ị ga-eji mee nke ahụ?
Youtube - ị na - enye Youtube ohere zuru ụwa ọnụ, nke na-abụghị nke a na-anaghị akwụ ụgwọ, nke enweghị ụgwọ, ikike na nke a na-enyefefe ikike iji, mụta, kesaa, kwadebe ọrụ ndị ọzọ, gosipụta ma rụọ ọrụ ntinye na njikọ weebụsaịtị Youtube na Youtube (na azụmahịa nke onye nọchiri ya, gụnyere na-enweghị mmachi maka ịkwalite na ịkesa akụkụ ma ọ bụ weebụsaịtị Youtube niile (yana ọrụ nrụpụta ya) na usoro mgbasa ozi ọ bụla yana site na ọwa mgbasa ozi ọ bụla.
Google - ị na-eduzi ma na-enye Google ikike, ma na-enye Google ikike enweghị ikike, nnabata na ikike na ikike, nnabata, nchekwa, ụzọ, bufee, chekwaa, detuo, gbanwee, kesaa, igosi, mmezigharị, edemede, ikwado ọrịre ma ọ bụ mgbazinye nke mbipụta nke, nyocha, na mepụta algọridim dabere na Iwu Ikike iji (i) nọrọ na nnabata ọdịnaya na sava Google, (ii) depụta akwụkwọ ikike ahụ; (iii) gosipụta, rụọ ma kesaa ọdịnaya enyere ikike
MySpace - Site na igosipụta ma ọ bụ bipụta (“biputere”) Ọdịnaya ọ bụla na ma ọ bụ site na Ọrụ MySpace, ị ga-enye MySpace.com ikike ikikere iji, gbanwee, rụọ ọrụ n’ihu ọha, gosipụta n’ihu ọha, mepụtakwa ma kesaa ụdị ọdịnaya a naanị na site na Ọrụ MySpace.
FLURL - You na-enyefe Ọrụ ikike a na-abụghị naanị ya iji bipụta, ahịa, ree, ikikere, iji ya mee ihe, ma jiri ya mee ihe n'ụzọ ọ bụla, ihe niile enyere na Ọrụ, Weebụsaịtị, na / ma ọ bụ jiri ya n'ụzọ ọ bụla na Ọrụ ahụ, gụnyere mana amachibidoro na egwu, foto, akwụkwọ edemede, nka, aha, aha na akara, ụghalaahịa, na akụ ọgụgụ isi ndị ọzọ. Agaghị akwụ gị ụgwọ maka mbugo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ enyere na Ọrụ ahụ.
DropShots - DropShots bụ, belụsọ na ekwuru ya, onye nwere ikike nwebisiinka na nchekwa data niile na Ọrụ yana ọdịnaya ya. Nweghị ike ibipụta, kesaa, wepụ, weghachite ma ọ bụ mepụtaghachi ọdịnaya ọ bụla n'ụdị ọ bụla (gụnyere depụtaghachi ya ma ọ bụ chekwaa ya na usoro ọ bụla site na kọmputa) ọzọ karịa dabere na ikikere ikike ejiri dị na ọkwa nwebisiinka
Kwụsị ịnye ọdịnaya gị n'efu! Companieslọ ọrụ ndị ahụ kwere nkwa MGBE ị ga-eji ọdịnaya gị gafee nkesa site na weebụsaịtị. Nnukwu ụlọ ọrụ ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha jiri ọdịnaya gị na mpụga saịtị ahụ. Nnukwu ụlọ ọrụ ga - ahapụkwa gị ka ị gaa n'ihu KWES yourR your ọdịnaya gị - ọbụlagodi mgbe ịhapụ ọrụ ha.
Guo Usoro Ojiji!
Ahụmahụ bụ n'efu, akụrụngwa abụghị…
Septemba 24, 2006 na 9:58 ehihie
Ozi ọma. Kedu ihe ị chere na Revver.com, nke na-ekewa ego ị nwetara na ọdịnaya gị?
Septemba 24, 2006 na 10:16 ehihie
Ana m enweta njehie script 500 na saịtị ha ugbu a…
Aga m elele Usoro ojiji mgbe akwadoro ha. Abụghị m onye ọka iwu - naanị ahụla ọtụtụ akụkọ na mkparịta ụka na-ekwu maka ndị nchịkọta ọdịnaya ndị a na-agwa ndị ọrụ ha ihe 'nwere' ọdịnaya, otu esi eji ya, yana ma enwere ike kwụọ onye na-eweta ọdịnaya ma ọ bụ na ọ gaghị akwụ ụgwọ maka ya. eji.
Septemba 25, 2006 na 2:23 ehihie
Ezigbo mma, Doug.
Karịsịa na-eburu n'uche na ọbụna mgbasa ozi mgbasa ozi bara ọgaranya anaghịzi akwụ ụgwọ ogwe aka na a ụkwụ… (Lee m nwere ike ịkwado MediaTemple nke m gbanwere mgbe m kwesịworo ntụkwasị obi nye onye na-eweta ihe nkesa mbụ m ihe dị ka afọ 5. Ha nwere afọ ojuju ndị ahịa dị elu, ọ tụrụ m n'anya maka ọsọ ha na-aza ozi email ndị ahịa na-abụghị geeky. (Ma mba, anaghị m ha n'ọrụ…)
Ihe ọzọ kpatara na ị naghị anabata ọdịnaya nke gị na nnọkọ nke atọ bụ, ị maghị otú ha si agbanwe atumatu ha n'ọdịnihu - nke ọma, ma ọ bụ na ị maghị otú ị si agbanwe nke gị ... online, na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa chọrọ ịzụta ya n'aka gị - ị nweghị ike ire ya ozugbo ị kwenyere na usoro Doug depụtara ...)
Yabụ: kwado onwe gị. Nwee anụrị. Bụrụ ihe okike.
Na dị ka plọg, ebe a bụ ụfọdụ vidiyo m gbara.
Mar 24, 2007 na 11: 03 AM
Achọrọ m ikwu ngwa ngwa na edemede gị. Daalụ maka ịgba ndị na-ese ihe na-agba ume na-atụle ịnyefe mgbasa ozi ha n'aka onye ọbịa / nkesa ndị ọzọ. N'ezie, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-adịghị atụle azụmahịa na akụkụ iwu nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ na ikike ọgụgụ isi, ọ pụkwara ịdị mfe maka ndị nwere ohere - ma ha bụ ndị njikwa, ndị nnọchiteanya, akara ndekọ (nnukwu ma ọ bụ obere), ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ weebụsaịtị - were ohere nke ndị na-enweghị ikike azụmahịa ma ọ bụ nghọta bụ isi nke iwu nwebiisinka US.
N'ịbụ ndị e kwuworo, ndị nkwusa na ndị nkesa ndị ọzọ ka enweghị nhọrọ ma ọ bụghị ịchọ ka ndị nwe nwebisiinka nye ndị ọzọ ikike. na-abụghị nanị ikike ụfọdụ ikike nke onye ji nwebiisinka (onye na-ese ihe), gụnyere ndị ọzọikike imepụtagharị, kesaa na igosipụta ọhaneze ihe nwebiisinka. Ma ọ bụghị ya, onye mbipụta nke atọ ga-enwe ụgwọ maka mmebi iwu nwebiisinka. Ọ bụ ya mere asụsụ dị n'ime usoro nkwekọrịta eji eme ihe dị n'elu (na ebe nrụọrụ weebụ anyị abụghị ihe dị iche).
Ọ bụrụ na onye nkwusa nke atọ achọọ naanị ikike, mgbe ahụ, a na-enyo enyo, ma eleghị anya, a ga-ezere ọrụ ahụ, dabere na ọnọdụ.
Mmụọ nke Radio LLC
Apr 23, 2007 na 4: 05 PM
Kedu otu mmadụ si akwado vidiyo ma ọ bụ pọdkastị nke ha? Enwere m vidiyo na webụsaịtị m mana kedu ka m ga-esi nweta ọtụtụ mmadụ ịhụ ya?
Apr 26, 2007 na 2: 07 PM
Biko gwa anyị nke nnukwu ụlọ ọrụ ị na-ekwu na njedebe nke post gị! Ị hapụ m ka m kwụgidere! Ọ ga-amasị m ịnọgide na-enwe ikike niile gbasara egwu m, ma a na-amanye m iji ụfọdụ usoro maka eziokwu dị mfe bụ ebe ndị na-ege ntị na-agha ụgha.
M na-eche na saịtị ụlọ ọrụ mmekọrịta, ndị REAL, dị ka agbụrụ.net bụ ebe chara acha maka mgbasa ozi mgbasa ozi na-achịkwa nka. N'oge a, otu ahụ enweghị ikike nnabata egwu, mana ọ na-enye ohere njikọ agbakwunyere na saịtị ọdịnaya dịka YouTube. Enwere m akaụntụ MySpace nke ejikọrọ na SnowCap, ebe m nwere ike ịtọ ọnụahịa nke egwu ahụ, nke ha na-edepụta. Naanị m na-eji ya egwuri egwu ma chọọ mkpughe karịa, yabụ m ga-atụle ịkwado ọrụ m ebe ọzọ. Saịtị ndị buru ibu yiri ka ọ nọ na nso nke saturation na etinyere ya na vidiyo karịa naanị ụda.
Apr 26, 2007 na 5: 13 PM
Ndị isi ụlọ ọrụ niile na-emegharị usoro ojiji ha ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Ọ ga-achọ nyocha na-aga n'ihu. Ana m adọ ndị mmadụ aka na ntị na ha ga-enyocharịrị usoro ojiji niile tupu ha ebugote ihe ọ bụla ha 'chere' ha nwere. Ọ ga-amasị m ịhụ mmadụ na-efunahụ ikike nke egwu ya ma ọ bụ vidiyo naanị site na ibugo ya na sava… ebe onye ọzọ nwere ike nweta ego na ya!
Aug 22, 2008 na 5: 53 AM
Ebe a bụ Kiqlo ọzọ bara uru
Kiqlo enweghị mmasị na ịnweta ikike dị na ọdịnaya gị. Kiqlo na-enye gị ohere ire ọdịnaya gị ka ị na-edobe ikike nwebiisinka gị. Ị nwere ike bulite ya n'efu, ree ya n'efu na Kiqlo anaghị ewepụ ya ọ bụla. Ọ bụ eziokwu! Enweghị nwude!
Ị nwere ike ibudata, bulite na-enweghị nbanye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ire, ịkwesịrị ịbanye. Ọ bụ echiche ọhụrụ mana ọ bụ maka ebumnuche a.
Ọkt 21, 2008 na 2:25 AM
Biko mee ka anyị mara ihe ị chere gbasara Ourstage.com. Mụ na nwunye m bụ ndị na-ede abụ ma anyị etinyela abụ ole na ole na saịtị ha. Ụbọchị ole na ole mbụ e debere anyị na 10 kacha elu na ole na ole ọbụna na-aga nọmba nke mbụ na mpaghara anyị ma mgbe ụbọchị 4 ruo 5 gasịrị, egwu anyị niile na-adaba na ala ma ọ bụ n'etiti ọkwa na ịtụ vootu nke egwu anyị adịghị. mee ka onye ọ bụla n'ime anyị lie nke uche ?? Ha na-ekwu na ikike niile ka dị nke anyị yana na ahịa niile ga-aga na akaụntụ PayPal anyị mana ruo ugbu a, anyị emebeghị penny ọbara ọbara nke egwu anyị ebisara. A na-akpọrọ anyị ụgbọ ịnyịnya? Agụrụ m ọtụtụ nkwekọrịta mana ọ bụghị ha niile. M ass-u-med ihe niile bụ na elu na elu ma mgbe agụchara gị ise mere m na-ejighị n'aka?
Daalụ maka blọọgụ gị. Nwee ezigbo ụbọchị ka ị nweta ngozi nke ihe ndụ na ịhụnanya nwere maka gị kwa ụbọchị.
N'aha ngozi Ya.
Nov 18, 2009 na 10:13 ehihie
N'aka nke ọzọ, ebugola egwu gị ebe ọ bụla ma bụrụ onye amaghị aha maka oge ndụ gị niile!
Ee, na-agụ usoro na ọnọdụ mgbe niile (ị ga-atụkwasị obi na ị gaghị eme ya) na ọtụtụ oge ndị a agaghị emegbu.
Echere m na ọ bụ okwu inye ntakịrị iji nweta ntakịrị, ị gaghị atụ anya ikpughe na-ekpugheghị onwe gị (gbaghara okwu ahụ) Abụ m onye na-ede egwú na-ede maka TV / ihe nkiri, M na-ejikwa mee ka ndụ dị mma na ya ma agaghị m guzo ohere na hell ma ọ bụrụ na m na-atụkwasịghị ndị mmadụ obi na ha agaghị eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi n'okwukwe dị na ha nke m tinyeworo site n'inyefe egwu m. (ma m ka ga-eme nke a oge niile, ma ọ bụghị ya, ọrụ ga-akpọnwụ)
The kasị mmegbu nke m music abịawo mgbe m music ama aired na TV wee na-aga maka ire ere na eze na iTunes wdg, onye kpebiri ịzụta ya wee tinye ya na a fanite nke TV show o si, maka free download.
A na-akwụ m ụgwọ site na youtube mgbe egwu m na-egwu n'ihi na nke ahụ bụ ụzọ ọ na-arụ ọrụ n'ezie, ọ bụghị dị ka isiokwu ahụ na-ekwu (Abụ m onye otu ndị otu nchịkọta na-achọpụta nke ahụ) PRS
Yabụ, biko egbula akụkọ a.
Dee 4, 2009 na 12: 27 AM
Ị chere na ndị mmadụ ga-agbaba na saịtị gị n'akụkụ azụ azụ nke ịntanetị ịhụ vidiyo ole na ole? Ndị mmadụ na-aga Youtube na saịtị ndị ọzọ n'ihi na ha na-ewu ewu na ndị mmadụ nwere ike ịhụ ọdịnaya ha. M ga-asị na ezigbo 80%+ nke ndị na-ebugo ihe anaghị eche ma ha na-eji ya ma ọ bụ na agbanyeghị, amaara m na anaghị m. O doro anya na ha ga-enweta hits n'efu na saịtị ha, mana nke ahụ bụ azụmahịa ha. Ị gaghị ebugote ha ma ọ bụrụ na ha enwetaghị hits. Naanị otu ụzọ ịzụrụ saịtị na ịnweta nwebisiinka na ọdịnaya gị bụ ma ọ bụrụ na ị bụ ndị ama ama, ndị ama ama na-emepụta ọtụtụ vidiyo na/ma ọ bụ foto. Ma ọ bụghị ya, ị na-ewepụ mpi nke gị ma na-agbalị ịdị mkpa.